शेरबहादुर देउवा समूहलाई थप ५ मन्त्रालय, को-को मन्त्री ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
शेरबहादुर देउवा समूहलाई थप ५ मन्त्रालय, को-को मन्त्री ?
नेपाली कांग्रेसले अहिले सम्म पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीवाट मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन।
अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरेपछि देउवाले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेको छैन। माओबादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल समूहसंग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने भएपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छैनन्।
नेपाल समूहको आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादका करण सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे टुंगो लगाउन सकेक छैन। तर नेपाल समूह भने सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले थप ९ मन्त्रालय पाएको छ। जसपा महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि कांग्रेसले थप ९ मन्त्रालय पाएको हो। ठाकुर पक्षले जसपाको आधिकारिकता नपाएपछि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको हो।
स्रोतका अनुसार देउवा समूहलाई ५ मन्त्रालय भागमा परेको छ। अन्य समूहलाई पनि खुशी बनाउन परेको कारणले गर्दा देउवा समूहलाई जम्मा ५ मन्त्रालय पाएको हो।
ठाकुर पक्षका सबै सांसदको पद जाने पक्का छ। सांसददेखि प्रदेश सांसद र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको समेत पद जाने पक्का छ।
काँग्रेसवाट तिन मन्त्रालय लिसकेको छ भने अब बाँकी ६ देखि ७ मन्त्रालय पाउने स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार कांग्रेसवाट दिला संग्रोला, मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, गगन थापालगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्का छ।
माओबादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीवाट मन्त्रीको नाम लगभग टुंगो लगाएको छ। यसअघि नै माओबादीवाट २ जना मन्त्री बनिसकेका छन्।
पम्फा भुषाल उर्जामन्त्री र जनार्धन शर्मा अर्थमन्त्री बनिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार माओबादी केन्द्रलाई ८ मन्त्रालय दिने भएको छ दिने भएको छ। जसपा महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि माओबादी केन्द्रको भागमा थप मन्त्रालय परेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ बन्ने पक्का भएको छ। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ केहि दिनमै उपप्रधानमन्त्री बन्दै छन्।
त्यस्तैगरी माओवादी केन्द्रवाट देव गुरुङ, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, सुदन किराँती लगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने चर्चामा छ।
माओबादीको भागमा प्रदेश प्रमुख पनि परेको छ। आज मात्र माओवादी केन्द्रले नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश प्रमुखमा पार्टीका तर्फबाट शेरचनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय कायालयका सचिव श्रीराम खनालले जानकारी दिए ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शेरचनलाई हटाएर वैशाख २० गते सीताकुमारी पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने यादव २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । संविधान निर्माणसँगै प्रदेश संरचना बनेपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले त्यतिबेलाका सातैजना प्रदेश प्रमुख फेरेका थिए ।